စွဲဆေးသုတေသန (၂၀၀၈) တွင်ပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိသော - Brain On Your Porn
Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ စာရေးသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC ဇွန် 1, 2009 အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ ဇွန် 1, 2008; 63 (11): 1005-1006 ။
ဂယ်ရီ Aston-ဂျုံးစ် နှင့် ပတေရုသ W Kalivas
ဒါဟာတာရှည် (ဦးနှောက် norepinephrine (NE) စွဲလမ်းအတွက်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍကစားပေမယ့်ဒီအမြင်အများအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့ dopamine နဲ့အချိုမှုအဖြစ်စွဲလမ်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်အခြားဦးနှောက်စနစ်များကိုမှထင်ရှားတဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုအားဖြင့်မကြာသေးမီနှစ်များတွင်လွှမ်းမိုးနှင့် ပို. ပင်မကြာသေးမီကခဲ့ပြီး orexin ကြောင်းသံသယရှိထားပြီး1, 2) ။ သို့သော်သစ်ကိုလေ့လာမှုများလက်ရှိပြဿနာအတွက်2ဆောင်းပါးများအားဖြင့်ပုံအောအဖြစ်စွဲလမ်းအတွက် NE ၏အရေးပါမှုကိုအဘို့ဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထားပေးခွငျးဖွငျ့ဤလမ်းကြောင်းသစ် reverse မှစတင်ကြပါပြီ (Schank et al ။ , Zachary et al ။ ) ။
NE နှင့်စွဲလမ်း၏အစောပိုင်းလေ့လာမှုများ opiates နှင့် opiate ရုပ်သိမ်းရေးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ Opiates ပြင်းပြင်းထန်ထန် NE locus coeruleus (LC) အာရုံခံ၏ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့လုပ်ဆောင်မှုတားစီးနှင့် opiate ဆုတ်ခွာပြင်းပြင်းထန်ထန် LC opiate အလွဲသုံးစားမှုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍသောအမြင်မှဦးဆောင်, ဤဆဲလ်တွေမြှင့်လုပ်ဆောင်။ သို့သော် LC ၏တွေ့ရှိရပါသည်သို့မဟုတ်ယင်း၏ Project (စူးရှ opiate ဆုတ်ခွာ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဆန္ဒရှိဆိုင်းဘုတ်များအပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ပြီ3, 4) ။ ဆက်ဆက်, ဆုတ်ခွာစဉ်က LC အာရုံခံများ၏အလွန်အမင်းမြင့်မားသောလုပ်ဆောင်မှုအပြုအမူများအတွက်အကျိုးဆက်များရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့အဲဒီအကျိုးဆက်များမသိရသေးရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
မကြာမီကလေ့လာမှုများ LC ထက်အခြား NE အာရုံခံ opiate အလွဲသုံးစားမှုအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် stria terminalis (BNST) ၏အိပ်ရာနျူကလိယအတွက် beta ကို adrenoceptor ဆွ opiate ဆုတ်ခွာ၏ဆန္ဒရှိများအတွက်အရေးပါလျက်ရှိ၏ ဤ (medullary A1 နှင့် A2 NE ဆဲလ်ကနေအဓိကအားမူရင်းမဟုတ် LC ne4) ။ BNST ၌ဤတူညီသော NE input ကိုနှင့်အဲဒီ receptor (စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်စိုးရိမ်စိတ်များအတွက်အရေးပါဖြစ်ရှာတွေ့ခဲ့သည်5), ကြည့်ရှု (opiate ဆုတ်ခွာ၏ဆန္ဒရှိဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်စိုးရိမ်စိတ်နှင့်ဆက်စပ်သောစေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း ကိန်းဂဏန်း 1 ) ကို BNST မှ NE input ကိုသရုပ်ဖော်။
ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ BNST မှသိထား Illustrator NE စီမံချက်များနှင့်, limbic စနစ်၏အခြားဒေသများဖို့ BNST ကနေနောက်ဆက်တွဲရလဒ်။ opioid ဆုတ်ခွာ၏ဖြစ်ရပ်မှာ NTS များနှင့် A1 ဆဲလ်အုပ်စုများအတွက် NE အာရုံခံ၏ activation အတွက် NE လွှတ်ပေးရန်မြှင့်တင်ရန် ...
နည်းပါးလာလေ့လာမှုများလှုံ့ဆော်အလွဲသုံးစားမှုများတွင်ဦးနှောက် NE ပါဝင်ပတ်သက်မှုဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ ပစ္စုပ္ပန်ပြဿနာအတွက်တစ်ဦးကဆောင်းပါး psychostimulant အလွဲသုံးစားမှုများတွင် NE နှင့်စွဲလမ်း၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကိုတိုးချဲ့နှင့်အတူတူပင် themes များအချို့ opiate အလွဲသုံးစားမှုများအတွက်အဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ ဘေးဖယ်ယင်း၏လူသိများတဲ့ကြိုး / အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအနေဖြင့်စူးရှသောကိုကင်းလည်း (ကအစွမ်းထက် anxiogenic အေးဂျင့်အဖြစ်ဆောင်ရွက်6) ။ Schank et al ။ (pg ဤပြဿနာများ၏ *) ဗဟို NE ထိုကဲ့သို့သောကင်း-သွေးဆောင်စိုးရိမ်စိတ်များအတွက်လိုအပ်သောကြောင်းပြသနိုင်ရန်ကြော့, မကြာသေးမီကတီထွင် dopamine-beta-hydroxylase (DBH) ခေါက်ထွက် mouse ကိုအသုံးပြုသည်။ ဒါကတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ် dopamine ထံမှ NE အောင်များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော DBH အင်ဇိုင်း, ကင်းမဲ့။ စံစိုးရိမ်စိတ်စမ်းသပ်မှု (သို့ခြီးမွှောကျပေါင်းဝင်္) ကိုသုံးပြီး, အစုံစမ်းစစ်ဆေးရိုင်း-type အမျိုးအစားကြွက်ပြုပါသော်လည်း DBH နောက်ကောက်တစ်ခုစူးရှသောကိုကင်းဆေးထိုးရန်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းတုံ့ပြန်မှုပြမတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အရေးကြီးတာကအဲဒီ DBH နောက်ကောက်အတွက်စိုးရိမ်ပူပန် DOPS, DBH နှင့် dopamine အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲလိုအပ်မပါဘဲ NE သို့ကူးပြောင်းနိုင်မယ့်ဒြပ်ပေါင်း၏အုပ်ချုပ်ရေးအားဖြင့်ကယ်ဆယ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးနောက်ကောက်လေ့လာမှုတစ်ခုပုံမှန်မဟုတ်သောပေမယ့်ခိုင်မာတဲ့ခြေလှမ်းမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးထို့နောက် DBH inhibitor disulfiram, သို့မဟုတ် beta ကို adrenoceptor ရန် propranolol, ဒါပေမယ့်မရ alpha1 သို့မဟုတ် alpha2 adrenoceptor ရန်, တစ်ဦးထုတ်လုပ်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်း, ရိုင်းအမျိုးအစားကြွက်တွေမှာ pharmacological ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်အတူအထက်ပါရလဒ်တွေကိုအတည်ပြုခဲ့သည် အလားတူအပြုအမူရလဒ်။ ထို့ကြောင့်ဤလေ့လာမှုများကိုကင်းများ၏ anxiogenic သက်ရောက်မှုကိုအနည်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက် beta ကို adrenoceptors မှာသရုပ်ဆောင် NE ရန်, ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဤရလဒ်သည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အတူမြင့်မားသောဦးနှောက် NE လင့်ထားသောအများအပြားယခင်တွေ့ရှိချက်များနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်။ အရေးကြီးတာကအဲဒီရလဒ်တွေကိုလည်း opiate သို့မဟုတ်ကင်းကနေဆုတ်ခွာစဉ်ကစိုးရိမ်ပူပန်ခြီးမွှောကျကြောင်းတွေ့ရှိချက်များကိုဆင်တူ beta ကိုအဲဒီ receptor ဆွအပေါ်သို့မှီခိုဖြစ်ပါတယ် (7) ။ စာရေးသူထောက်ပြသကဲ့သို့, ဒီဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်စိုးရိမ်စိတ်၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်များကိုလက်တွေ့ကုသမှုအများဆုံးသက်ဆိုင်ရာရှိရာအမှတ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဆုတ်ခွာတုံ့ပြန်မှုများရှောင်ရှားခြင်း abstinence စဉ်အတွင်း relapse တစ်ဦးမောင်းနှင်အချက်ကြောင့်, NE-နှင့်ဆက်စပ်စိုးရိမ်စိတ်ကန့်သတ်ကြောင်းကုသမှု abstinence ရှည်နှင့် relapse လျော့ကျစေနိုင်တယ်။ ဒါကနိဂုံးချုပ် (ကိုကင်း-ရှာ၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement လည်း beta ကို adrenoceptor ရန်ကုသမှုပိတ်ဆို့ကြောင်းယခင်တွေ့ရှိချက်များနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်8).
လူတန်းစားကိုကင်းများ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ကင်းဆုတ်ခွာ၏ပထမဦးဆုံးမှာအတန်ငယ်ဝိရောဓိဖြစ်ပါတယ်အကြားဒီဆက်နွယ်မှု - အဘယ်ကြောင့်ကိုကင်းကင်းဆုတ်ခွာဖို့တုန့်ပြန်ပုံနဲ့ဆင်တူတဲ့တုံ့ပြန်မှုထုတ်လုပ်ရန် acute မလဲ ဤအ noradrenergically-mediated စိုးရိမ်စိတ်တုံ့ပြန်မှုများဆယ်လူလာအလွှာဟာအဆုံးအဖြတ်အနာဂတျအတှကျအရေးကြီးသောအလုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သူတို့ကင်းအလွဲသုံးစားမှုအရေးကြီးသောကဏ္ဍများသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးစေခြင်းငှါအခြားဝိရောဓိပြဿနာသရုပျဖျောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မည်သို့ပင်သည်ဤစိုးရိမ်ပူပန်တုံ့ပြန်မှုအခြေခံဆယ်လူလာယန္တရား, သူတို့ကသိသိသာသာရှိပါတယ်။ ဒါကသူ့ရဲ့ hedonic နှင့်အားဖြည့်လုပ်ရပ်များအပြင်စူးရှသောကိုကင်းစိုးရိမ်စိတ်, ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးဆုတ်ခွာကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှုကိုထုတ်လုပ်သည်။ ဆုတ်ခွာ-ဆက်စပ်စိုးရိမ်စိတ်ကိုရှောင်ရှားရန်အလိုဆန္ဒထို့နောက်နောက်ထပ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်နောက်တဖန်ဆက်စပ်တဏှာထုတ်လုပ်, ကိုကင်းတဏှာနှင့်စားသုံးမှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်စူးရှသောကိုကင်းနှင့်အကင်းဆုတ်ခွာထုတ်လုပ်အလားတူစိုးရိမ်ကင်းအလွဲသုံးစားမှုပို Insidious နှင့်ဆေးခန်းအရေးကြီးသောကဏ္ဍများအချို့ကိုအခြေခံစေခြင်းငှါအပြုသဘောတုံ့ပြန်ချက်သံသရာထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ဤသည်စူးရှသောကိုကင်းနှင့်အကင်းရုပ်သိမ်းရေးနှင့်ဆက်စပ် NE-မောင်းနှင်စိုးရိမ်ပူပန်ကုသဆေးခန်းအကျိုးရှိသောဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
NE ကင်းဖို့ anxiety- သို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှု-related တုံ့ပြန်မှုမောင်းထုတ်ရန်ခေတ္တရာကဒီလေ့လာမှုမှာတစျခုမှာထူးချွန်မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ ယခင်အလုပ်တိုးချဲ့ amygdala ကောင်းတစ်ဦးဖြစ်နိုင်ချေ, အထူးသဖြင့် BNST ကြောင်းဖော်ပြသည်။ Delfs et al (4) BNST အတွက် beta ကို adrenocceptor ဆွစူးရှ opiate ဆုတ်ခွာ၏ဆန္ဒရှိများအတွက်အရေးပါသည်, NE ၏ဆက်စပ်အရင်းအမြစ် medullary A1 နှင့် A2 အာရုံခံကြောင်းပြသခဲ့သည်။ နောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှုများ (ဒီတူညီတဲ့လမ်းကြောင်း cocaine- သို့မဟုတ် opiate-ရှာကြံ၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement များအတွက်လိုအပ်သောကြောင်းပြသ9) ။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, ဒီတူညီတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန် (စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်စိုးရိမ်စိတ်တုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်5) ။ ထို့ကြောင့်တိုးချဲ့ amygdala သို့ medullary NE စီမံချက်များအရေးကြီးတာကမူးယစ်ဆေးဝါး relapse ဆက်စပ်သည်ဤစိုးရိမ်ပူပန်မှု / စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်။ အဆိုပါ Schank et al လေ့လာမှုတစ်ခုမှာအရေးကြီးသော extension ကိုဒီလမ်းကြောင်းကိုလည်းစူးရှသောကိုကင်းများ၏ anxiogenic ဆိုးကျိုးများအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်လျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်ပါလိမ့်မယ်; ထိုကဲ့သို့သောတွေ့ရှိချက်နောက်ထပ်စူးရှသောကိုကင်းနှင့်ရုပ်သိမ်းရေးနှင့်ဆက်စပ်စိုးရိမ်စိတ်များအကြားလင့်များတည်ထောင်ရန်, ဤစိုးရိမ်ပူပန်တုံ့ပြန်မှုများအတွက်ယန္တရားများနှင့်ကုသမှုထပ်မံ elucidation အပေါ်သုတေသနအာရုံစိုက်လိမ့်မယ်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းတဦးတည်းအရေးကြီးသောထူးချွန်ပြဿနာကိုကင်းနှင့်အ opioids စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်သောကမှဆက်စပ်အပြုအမူတုံ့ပြန်မှုပြောင်းလဲပစ်ရန် NE အာရုံခံပြောင်းလဲမှုများထုတ်လုပ်ပုံဖြစ်ပါသည်။ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်သောက relapse precipitating ကနေစွဲလမ်းဖွံ့ဖြိုးဆဲတစ်ဦးအားနည်းချက်အချက်ဖြစ်ခြင်းအထိမူးယစ်ဆေးစွဲနှင့်အတူတစ်ဦးကောင်းမွန်စွာသတ်မှတ်နှင့်ကျယ်ပြန့်အသင်းအဖွဲ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်, NE အာရုံခံအတွက်စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများထုတ်လုပ်သည့်မော်လီကျူးအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်နားလည်သဘောပေါက်စွဲထိန်းချုပ်ဖို့ကုထုံးဖွံ့ဖြိုးဆဲဘို့မော်လီကျူးပစ်မှတ်ထုတ်ဖေါ်ဖို့အလားအလာရှိပါတယ်။ ဤ volume ထဲမှာ, Zachary et al (*) ကစက္ကူဒီဦးတည်ချက်အတွက်အရေးပါသောခြေလှမ်းကြာပါသည်။ adenylyl cyclase ပြောင်းလဲမှုများ (AC) လှုပ်ရှားမှု, NE အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုနှင့်နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင်ဆုတ်ခွာ syndrome ရောဂါအကြားကောင်းစွာထူထောင်တဲ့ဆကျဆံရေးအပျေါမှာအခြေခံပြီး, ဤစာရေးဆရာများ, ကယ်လစီယမ် / calmodulin အားဖြင့် activated ဖြစ်ကြောင်းသုံးခု AC အ isoforms နှစ်ခုအတွက်မျိုးဗီဇဖျက်ခြင်းနှင့်အတူကြွက်တွေအလုပ် AC1 နှင့် AC8 ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, AC1 နှင့် AC8 ၏နှစ်ဆကိုပယ်ဖျက်ရေရှည်တည်တံ့မယ့် mouse ကိုလေ့လာခဲ့သည်။ အဆိုပါ AC1 + AC8 နှင့်အတူတွေ့ရှိချက်ကြွက် (KO) ထွက်ခေါက်ပေမဲ့လည်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအစားထိုးပြောင်းလဲမှုများကိုအားဖြင့်ရှက်ကြောက်ထင်ရှားတစ်ခုချင်းစီ isozyme ၏တစ်ခုတည်းကိုပယ်ဖျက်လျှော့ချ naloxone-precipitated အပြုအမူရုပ်သိမ်းရေးအပါအဝင်နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်များ၏သက်ရောက်မှုမှအတော်လေးယဉ်ပါးခဲ့တဲ့တသမတ်တည်း phenotype ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်အလားအလာလျော့နည်းသွား Basal ပစ်ခတ်ရန်နှုန်းထားများနှင့် LC NE အာရုံခံ၏ forskolin-သွေးဆောင်ပစ်ခတ်ရန်၏။ ထို့အပွငျ mu opioids အားဖြင့်တားစီးဖို့ LC အာရုံခံအတွက်သည်းခံစိတ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု AC1 နှင့် AC8 KO ကြွက်တွေမှာ attenuated ခဲ့သည်။ အရေးကြီးတာက, မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင် analgesia မှမော်ဖင်းအကိုက်ခြင်းနှင့်သည်းခံ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏စူးရှသော analgesic အကျိုးသက်ရောက်မှုသုံးခုစလုံး KO genotype အတွက်နဂိုအတိုင်းရှိကြ၏။ ဤရွေ့ကားဒေတာကြင်မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင်ဆုတ်ခွာ syndrome ရောဂါထိန်းညှိအတွက် AC အများ၏အခန်းကဏ္ဍနှင့် AC အလှုပ်ရှားမှုနဲ့မော်ဖင်းအကိုက်ရုပ်သိမ်းရေးအကြားအသင်းအဖွဲ့အတည်ပြုပါ။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် Zachary et al ၏အရေးအပါဆုံးရှုထောင့်။ မော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာ၏အလားအလာဆက်စပ်မှုများအတွက် LC အတွက်မျိုးဗီဇစကားရပ်ပုံစံများမျက်နှာပြင်မှပထမဦးဆုံးကြိုးပမ်းမှုအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်တစ်ရှူးများနှင့်တစ်ဦးချင်းအမူအကျင့်ပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောအပါအဝင်အများအပြားအကြောင်းရင်းများ, များအတွက်စိတ်ညစ်စရာတာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်မှကွဲပြား phenotypic အမူအကျင့်များနှင့် electrophysiological တုံ့ပြန်မှုကိုတင်ပြကြောင်း genotype အကြားမျိုးဗီဇစကားရပ်ထဲမှာသွေးဆောင်မော်ဖင်းအကိုက်များ၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းစသောအပြောင်းအလဲရုပ်သိမ်းရေးနှင့်အတူဆက်စပ်မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကို၏မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုပေလိမ့်မည်။ LC အာရုံခံ၏ထိုကဲ့သို့သောကျယ်ပြန့်မျိုးဗီဇကိုမှာဒီပထမဦးဆုံးသူရဲကြိုးပမ်းမှုအစောပိုင်းလေ့လာမှုများအပေါ်မှာအခြေခံမျှော်လင့်ချက်များနှင့်အညီရှိကြ၏အများအပြားရာ၏ genotype အကြားစိတ်ဝင်စားဖို့ဘာသာဂုဏ်ထူး, ဖော်ထုတ်ရန်လုပ်ခဲ့တယ်စဉ်ကံမကောင်းစွာပဲ, ကအနာဂတ်အတွက်ပစ်မှတ်ထားမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုယ်စားလှယ်လောင်း၏သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ကထုတ်ဖေါ်မပြုခဲ့ လေ့လာမှုများ။ ပြန်ပြောင်းကြည့်ရမည်ဆိုလျှင်, ကဤအစီရင်ခံစာအတွက်ထုတ်ပေးပင်အထင်ကြီးဒေတာဘေ့စထိုကဲ့သို့သော opiate ဆုတ်ခွာအဖြစ်ရှုပ်ထွေးသောအပြုအမူထိန်းညှိအရေးပါဘုံအချက်များကိုသိရှိနိုင်ဖို့လုံလောက်သောသတင်းအချက်အလက်များမဆံ့ဖို့မျှော်လင့်ထားရန်ဖြစ်ကောင်းအလွန်အမင်းအကောင်းမြင်ဖြစ်၏ အထူးသဖြင့်အသုံးပြုတဲ့မျိုးဗီဇမော်ဒယ်တစ်ဦး AC အ isozyme ကုဒ်သွင်းသည့်မျိုးဗီဇတစ်ခုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပယ်ဖျက်ရေးနှင့်ဖျက်မှုအတွက် LC မှတိကျတဲ့ဦးနှောက်တစ်လျှောက်လုံးကြီးနှင့်မကြောင်းကိုပေးတော်မူ၏။ သင်တန်း၏ဖြေရှင်းချက်ကိုဤအစီရင်ခံစာတွင်ထပ်မံပြင်းပြင်းထန်ထန်နာတာရှည် opioids အားဖြင့်သွေးဆောင်ဆုတ်ခွာ phenotype ထိန်းညှိခြင်းအလိုငှါ၎င်းမျိုးနွယ်၏မျိုးရိုးဗီဇ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုခွဲထုတ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ဖို့နောက်ထပ်မျိုးရိုးဗီဇချဉ်းကပ် အသုံးပြု. အနာဂတ်လေ့လာမှုများအတွက်အရေးပါသောပထမခြေလှမ်းဖြစ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ဖော် - နှစ်ခုစလုံးစာရေးဆရာများမျှပြီးတော့ biomedical ဘဏ္ဍာရေးအကျိုးစီးပွားသို့မဟုတ်အကျိုးစီးပွားအလားအလာပဋိပက္ခများကိုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
1 ။ Weinshenker: D, Schroeder JP ။ အဲဒီမှာနှင့်တဖန်ပြန်လှ: တစ်ဦးက Norepinephrine ၏ပုံပြင်များနှင့်ဆေးဝါးစွဲလမ်း။ Neuropsychopharmacology ။ 2006; 32: 1433-1451 ။ [PubMed]
2 ။ Harris က, G, Aston-ဂျုံးစ် G. အ arousal နှင့်ဆုလာဘ်: orexin function ကိုတစ်ဦး dichotomy ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2006; 29: 571-577 ။ [PubMed]
3 ။ ခရစ် MJ, Williams က JT, Osborne PB, Bellchambers အီး။ opioid ရုပ်သိမ်းရေးအတွက် locus အဘယ်မှာရှိသနည်း ခေတ်ရေစီးကြောင်း Pharmacol သိပ္ပံ။ 1997; 18: 134-140 ။ [PubMed]
4 ။ Delfs J ကို, Zhu Y ကို, Druhan J ကို, Aston-ဂျုံးစ် G. အ Noradrenaline အဆိုပါ ventral forebrain အတွက် opiate ဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်ခြင်းကိုမနှစ်သက်ဘို့အရေးကြီးသည်။ သဘာဝ။ 2000; 403: 430-434 ။ [PubMed]
5 ။ Cecchi M က, Khoshbouei H ကို, Javors M က, Morilak DA ။ စူးရှသောကဖိစီးမှုမှအမူအကျင့်များနှင့် neuroendocrine တုံ့ပြန်မှုအပေါ် stria terminalis များ၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အိပ်ရာနျူကလိယအတွက် norepinephrine ၏ Modulatory ဆိုးကျိုးများ။ neuroscience ။ 2002; 112: 13-21 ။ [PubMed]
6 ။ နာကျင်မှုက TA, Jackman SL, Olmstead MC ။ ကိုကင်း-သွေးဆောင်စိုးရိမ်စိတ်: diazepam ခြင်းဖြင့်လျှော့ချရေး, ဒါပေမယ့်မရ buspirone, dimenhydrinate သို့မဟုတ် diphenhydramine ။ ပြုမူနေ Pharmacol ။ 2002; 13: 511-523 ။ [PubMed]
7 ။ Harris က, G, Aston-ဂျုံးစ် G. အ Beta ကို-adrenergic ရန်ကိုကင်းနှင့်အမော်ဖင်းအကိုက်မှီခိုကြွက်များတွင်ငွေထုတ်စိုးရိမ်စိတ် attenuate ။ Psychopharmacology ။ 1993; 113: 131-136 ။ [PubMed]
8 ။ Leri က F, Flores J ကို, Rodaros: D, စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်သို့သော်မ Stria Terminalis ဒါမှမဟုတ် Amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယ၏အိပ်ရာနျူကလိယသို့ Noradrenergic ရန်၏ပြုတ်ရည်များကကင်း-သွေးဆောင် Reinstatement ၏ Stewart ကဂျေပိတ်ဆို့ထားခြင်း။ J ကို neuroscience ။ 2002; 22: 5713-5718 ။ [PubMed]
9 ။ ကြွက်များတွင်ရှာကြံဘိန်းဖြူ Shaham Y ကို, Highfield: D, Delfs J ကို, Leung က S, Stewart ကဂျေ Clonidine လုပ်ကွက်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement: locus coeruleus noradrenergic အာရုံခံ၏လွတ်လပ်သောတစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှု။ EUR J ကို neuroscience ။ 2000; 12: 292-302 ။ [PubMed]
10 ။ Aston-ဂျုံးစ်, G, Delfs J ကို, Druhan J ကို, Zhu Y. အဆိုပါ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယ: opiate ရုပ်သိမ်းရေးအတွက် noradrenergic လုပ်ရပ်များများအတွက်ပစ်မှတ် site ကို။ ခုနှစ်တွင်: McGinty J ကို, အယ်ဒီတာ။ အဆိုပါတိုးချဲ့ Amygdala ဖို့ Ventral Striatum ကနေတိုးတက်: Neuropsychiatry နှင့်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ သိပ္ပံနယူးယောက်အကယ်ဒမီ; နယူးယောက်: 1999 ။ စစ။ 486-498 ။ [PubMed]